Ithegi: Drupal | Martech Zone
NgoMgqibelo, ngoJuni 3, 2017 NgoMgqibelo, ngoJuni 10, 2017 UJohn Blue
Kutshanje ndiyabuza Yintoni iDrupal? njengendlela yokwazisa iDrupal. Umbuzo olandelayo oza engqondweni uthi "Ngaba kufuneka ndisebenzise iDrupal?" Lo ngumbuzo omkhulu. Amaxesha amaninzi ubona itekhnoloji kwaye into malunga nayo ikukhuthaza ukuba ucinge ukuyisebenzisa. Kwimeko yeDrupal usenokuba ukhe weva ukuba ezinye iiwebhusayithi ezintle ziqhutywa kule nkqubo yolawulo lomxholo ovulekileyo: iGrammy.com, iWhiteHouse.gov, iSymantec Connect, kunye neNtsha
Ngaba ujonge iDrupal? Ngaba ukhe weva ngeDrupal kodwa awuqinisekanga ngento onokuyenza yona? Ngaba i-Drupal icon ipholile nje ukuba ufuna ukuba yinxalenye yale ntshukumo? I-Drupal liqonga lolawulo lomxholo ovulekileyo elinika amandla iiwebhusayithi kunye nokusetyenziswa. Yakhelwe, isetyenzisiwe, kwaye ixhaswe luluntu olusebenzayo nolwahlukeneyo lwabantu kwihlabathi liphela. Ndicebisa ezi zixhobo ukuba uqalise ukufunda ngakumbi